Dhoobada Ti2SnC waa nooc cusub oo qaab dhismeedka dhoobada leh qaab dhismeedka lakabka gaarka ah kaas oo lagu shaqeyn karo. Waxay leedahay labadaba sifooyinka ugu fiican ee birta iyo dhoobada. Si la mid ah biraha, waxay leedahay faa iidooyinka korantada iyo kuleylka kuleylka wanaagsan, farsameynta, dulqaadka waxyeelada sare iyo iska caabinta shoogga kuleylka.
Dhoobada Ti2SnC waa nooc cusub oo qaab dhismeedka dhoobada leh qaab dhismeedka lakabka gaarka ah kaas oo lagu shaqeyn karo. Waxay leedahay labadaba sifooyinka ugu fiican ee birta iyo dhoobada. Si la mid ah birta, waxay leedahay faa iidooyinka korantada iyo kuleylka kuleylka, farsamaynta, dulqaadka waxyeelada sare iyo caabbinta shoogga kuleylka. Si la mid ah dhoobada, waxay leedahay qaab-dhismeed sare oo dabacsanaan, heerkul heer sare ah, u adkaysiga qiiqa iyo u adkaysiga daxalka Iyadoo lagu saleynayo faa'iidooyinka kor ku xusan, dhoobada Ti2SnC waxaa si ballaaran loogu isticmaali karaa jaantus ahaan ama xoojinta duulimaadyada, aerospace, hubka iyo qalabka, warshadaha nukliyeerka, macluumaadka elektarooniga ah iyo dhinacyada kale ee teknolojiyada sare. In kasta oo dhoobada Ti2SnC ay leedahay sifooyin dhammaystiran oo heer sare ah iyo rajooyin ballaadhan oo ballaadhan, diyaarinta maaddadani way adag tahay oo daahirnimadiisu way adag tahay in la xakameeyo, sidaa darteed dalabka dhoobada Ti2SnC way xadidan tahay. Sida lagu sharraxay suugaanta (J. Am. Ceram. Soc. 96, No. 10, 2013),
Ti2SnC dhoobada ay ku jiraan FexSny, Sn iyo TiC waxaa lagu helay qaadashada Fe oo ah kaaliyaha wakiilka iyo walxaha kulul ee isku daraya budada 1150 ° C iyo 50 MPa 10 saac.
Sida lagu sharraxay suugaanta (J. Am. Ceram. Soc. 99, No.7, 2016), Ti, Sn iyo garaaf ayaa loo isticmaalay alaab ceeriin ah waxaana lagu shubay 1600 ° C foornada tuubada leh jawiga argon 4 saac si loo helo Dhoobada Ti2SnC oo ay ku jiraan Sn iyo wasakhda TiC. Qaabka diyaarinta ee kor lagu sharaxay wuxuu leeyahay waqti dheer oo qashin ah, wasakhda TiC iyo FexSny ee soosaarana way adagtahay in laga saaro, taas oo saameyn aad u xun ku leh sifooyinka dhoobada Ti2SnC.
Sidaa darteed, diyaarinta nadiifsanaanta sare ee dhoobada Ti2SnC waa mid muhiimad weyn u leh adeegsiga ballaaran ee maaddadan. Waqtigan xaadirka ah, diyaarinta nadiifinta sare ee dhoobada Ti2SnC si rasmi ah looma soo sheegin.
Hore: 211Aluminium titanium aluminium, Ti2AlC
Xiga: Silicon Titanium Carbide, Ti3SiC2